यसकारण बिहे पछि मन बिगार्छन् मान्छेहरु, जानेर बेलैमा जोगिनु - यादका टुक्रा
यसकारण बिहे पछि मन बिगार्छन् मान्छेहरु, जानेर बेलैमा जोगिनु
3 months ago 934 Views
एक्ट्रा म्यारिटल अफेयर अर्थात बिवाहेत्तर सम्बन्ध । दम्पतीबीच भाँजो हाल्ने यो प्रवृत्ति हामीकहाँ पनि व्यापक हुँदै गएको छ । यो भनेको, बिवाहित पुरुष वा महिला परपुरुष/परस्त्रिसँग सम्बन्ध बढाउनु हो । शरीरिक वा मानसिक रुपमा । स्वभाविक हो, आफ्नो जीवनसाथीलाई धोका दिएर अर्कैसँग हिमचिम बढाएपछि दाम्पत्य जीवन धरापमा पर्छ । यो नहुनुपर्ने कुरा हो । तर, हुन्छ । किन ? आखिर किन कोही महिला वा पुरुष तेस्रो व्यक्तिसँग सम्वन्ध गाँस्न पुग्छन् र आफ्नो वैवाहिक सम्वन्धलाई धरापमा पुर्‍याउँछन्, यसका कारणहरु खोतलौं-
रमाइलो र रोमाञ्चका लागि : युवा जोडीहरु चाँडै नै कुनै चिजबाट बोर हुन्छन् । दाम्पत्य सम्वन्धका हकमा पनि यही लागू हुन्छ । आफ्नो पार्टनरसँग बोर भएकाहरु जिन्दगीमा नयाँ रोमाञ्च सिर्जना गर्न तेस्रो व्यक्तिसँग सम्वन्ध गाँस्न पुग्छन् । तर यो भुल्छन् कि यसबाट उनीहरुको जीवनमा ठूलो आँधिबेरी आउनेछ ।
यौन आकांक्षाका लागि : धेरै अनुसन्धानले उजागर गरेको तथ्य के हो भने करिब ८० प्रतिशत पुरुषहरु आफ्नो यौनजन्य आकांषाको तृप्तिका लागि श्रीमतीलाई धोका दिएर परस्त्रीगमन गर्छन् । उनीहरु या त आफ्नो श्रीमतीबाट सन्तुष्ट हुन सकिरहेका हुँदैनन् वा नयाँ स्वाद चाख्ने मनसायमा हुन्छन् ।
इगो प्रोब्लम : पुरानो जमानामा श्रीमती सँधै श्रीमानको नियन्त्रणमा रहन्थिन्, त्यसैले श्रीमानको गल्तीमा पनि औंला उठाउन डराउँथिन् । तर ,अहिले फरक अवस्था छ । श्रीमतीमा पनि म के कम ? भन्ने सोच हुन्छ । यदि श्रीमानले बाहिर कुनै स्त्रीसँग हिमचिम गरेको सुईको पाइन् भने त्यसको बदला लिन उनी पनि कुनै पुरुषसँग नजिकिन थाल्छिन् । कतिपय पुरुषहरु आफूप्रति केटीहरु क्रेजी हुन्छन् भन्ने श्रीमतीलाई देखाउनकै निम्ति पनि परस्त्रीगमनमा लाग्ने गरेको पाइन्छ ।
बोरिङ सम्वन्ध : बिबाहको केही वर्षपछि घर-परिवार र बच्चाहरुको जिम्मेवारीका बीच जोडीहरु एक-अर्कासँग समय बिताउन पाउँदैनन् । श्रीमती बच्चा, अफिस र घरको काममा यसरी फस्छिन् कि श्रीमानका लागि समय नै निकाल्न सक्दिनन् । यसबाट सम्वन्धमा खल्लोपना र गहु्रंगोपना सुरु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कयौं पुरुषहरु परस्त्रीगमनतिर आकषिर्त हुन्छन् ।
समाजमा आएको खुलापन : त्यसो त विवाहइतर सम्वन्धलाई नयाँ जमानाको देन हो भनेर भनिहाल्न मिल्दैन । पहिले पनि यस्ता सम्वन्ध हुन्थे, तर यसमा आजजस्तो खुलेआम बहस हुँदैनथ्यो । आजकाल विवाहइतर सम्वन्धले मानिसहरुलाई स्तब्ध तुल्याउँदैन । यसलाई लिएर मानिसहरुको दृष्टिकोण सामान्य बन्दै गएको छ । समाजमा आएको यो परिवर्तनले पनि विवाह इतर सम्वन्धलाई बढावा दिन्छ । साथै, अफिसमा पुरुष र महिला सँगै काम गर्दा एक-अर्काप्रति आकषिर्त हुने र प्रेम बस्ने सम्भावना रहन्छ ।
साथीहरुबीच रवाफ जमाउन : कयौं विवाहित पुरुषहरु साथीसंगतिको प्रेरणा र उक्साहटमा घरबाहिर अफेयर गर्न पुग्छन् । यस्तो अफेयरले साथीहरुबीच आफ्नो ठूलो शान हुने भ्रम उनीहरुलाई परेको हुन्छ । अर्कोतर्फ पत्नीप्रति वफादार पुरुषलाई साथीहरुले ‘जोइटिंग्रे’ भनेर गिज्याउने पनि गर्छन् । त्यसबाट पनि उनीहरुलाई अफेयर राख्ने हौसला प्राप्त हुन्छ ।
Don't Miss it बिवाहपछि हटाऔँ यी कुराहरु, नभए दाम्पत्य जीवन धरापमा पर्छ
Up Next ब्वाइफ्रेन्ड-गर्लफ्रेन्डबीच झगडा भइरहन्छ भने यसो गर्नु पर्छ है
कहिलै बच्चालाई सोध्नु भएको छ कि उसलाई कस्तो स्कुल मन पर्छ भनेर ?
यी हुन् ५ फाइदा बच्चालाई भान्साको काममा खटाउने
हामी चाहन्छौं, आफ्नो बच्चा सिपालु होस् । सबै काममा पोख्त होस् । व्यवहारिक होस् । यसका लागि के गर्ने ?…
मागी बिबाहको अवधारणा हाम्रो देशमा धेरै लोकप्रिय छ। केहि मान्छेहरु प्रेम बिबाह गर्न पनि रुची राख्छन। तर देशमा धेरै शंख्या…
2 years ago 4816 Views